Siyaasadda Uubatada Noorway oo laga soo horjeestey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Sveriges Radio
Siyaasadda Uubatada Noorway oo laga soo horjeestey
La daabacay onsdag 21 november 2012 kl 13.51
Dawladda Noorway ayaa sheegtay inay doneeyso in 50% uubatada ku dhaqana xadka dalkaasi la wadaago Iswiidhen loo aqoonsado iney yihiin noorwiijiyaan.
Iyadoona ey 25 ka mid ah ururada cimilada ee waddammada dhaca waooyiga yurub ka soo hor-jeed ka muujiyeen in haddii uu qorshahaa u hir-galo dalka Noorway tiro iminka ka badan ee uubatada ka mid ah lagu dili doono ugaarsi.
- Waa fikir uu ka dambeeyo in tiro middii hore ka yar laga dooneyo iney dalkaku sugnaadaan. Qaar ka mid ah uubatada ayaa ku dhala dhanka xuduudda ee dalka Iswiidhen, hase-yeeshee loo tiriyo iney ka tirsan yihiin Noorway. Waana mid u ogolaaneysa in toogasho lagu dili karo, mar haddii ey xuduudda ka gudbaan, sida uu hayadda wararka Iswiidhen ee TT u sheegay Tom Arnbom, ahna masuulka xoolaha duur-joogta ee hayadda caalamiga ah ee ugaarta WWF.
Si haddaba qorshahaa looga hor-tago ayey ka dhiidhiyeen 25 ka mid ah ururrada u dooda cimilada ee ka kala tirsan waddammada Finland, Noorway, iyo Iswiidhen u kala direen qoraallo madaxda hoggaammada labada waddan ee Noorway iyo Iswiidhen, iyagoona ku codsaday in labada dal iyo weliba dalka Ruushku xil islka saaraan sidii loo badbaadin lahaa uubatada duur-joogta ah.
Dalka Noorway ayuu goolkiisu yahay iney leeyihiin saddex goobood ee uubatadu ku dhaqan yihiin oo ku tarmaan, isla-markaana haddii ku xuduudda ku sugan ee ilmaha ku dhala haddii loo xisaabiyo ey dhici karto in la dilo kuwo ku nool goobo dalka Noorway gudihiisa ku dhaqan oo ilmo ku dhala. Iyada oo welibana uu dalkaasi buuxineyo heerkii looga baahnaa, sida ay sheegtay WWF.
- Haddii la xisaabiyo deegaannada uubatada ee xuduudaha ku yaala wuxuu dalkaasi yeelanayaa shan goobood oo uubatada dalkaasi ku dhaqan yihiin. Waxaa markaa la baabi'ineyaa laba ka mid ah, lana xisaabin doono in saddexi hartey.